I-Raw Tianeptine i-sodium ityuwa yomgubo (30123-17-2) Abakhiqizi-Phcoker
I-tianeptine i-sodium ityuwa ye powder iyigumbi le-tricyclic, ngumququzeleli okhethiweyo we-5-HT (i-serotonin; i-sc-201146) ifakwe kwi-vitro ....
I-Raw Tianeptine i-sodium ityuwa ye powder (30123-17-2) ividiyo
I-Raw Tianeptine i-sodium ityuwa ye powder (30123-17-2) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Raw Tianeptine yetyuyamu yeryuwa
Igama leKhemikhali Tianeptine sodium; I-Tianeptine ityuwa yeryudi; 30123-17-2; Stablon; Coaxil;
Inani leCAS 30123-17-2
I molecular Fi-ormula C21H24ClN2NaO4S
I molecular WSibhozo 458.93
IMasaisotopic Mass 458.104 g / mol
Ukuxuba Point 1800C
Bilisaba Point 609.2 ° C kwi-760 mmHg
Sisibetho Tukushisa Desiccate kwi RT
Aukuguquka I-tianeptine ityhudi yeryuwa yerhasi iyityuwa ye-Tianeptine.
I-Raw Tianeptine i-sodium ityuwa ye powder (30123-17-2) Inkcazo
I-Tianeptine ityuwa yesodium yityuwa yeTianeptine. I-Tianeptine, i-tricyclic compound, i-facilitator ekhethiweyo ye-5-HT (i-serotonin; i-sc-201146) ifumaneka kwi-vitro nakwi-vivo. Ukongezelela, i-Tianeptine ibikwa ukuba isebenze njenge-inhibitor yokukhetha i-dopamine kwaye ifana ne-amineptine. I-Tianeptine ayinayo impembelelo ephawukileyo kwi-monoamine. Kwisifundo esisebenzisa i-synaptosomes ecocekileyo kwi-brain brain, i-Tianeptine yaxelwa ukuba ikhulise i-serotonin ekukhethiweyo kwimiba yengqondo. I-synaptosomes ehlanjululweyo yafunyaniswa kwiigundane kwaye iqhutshwe nge-tritium-ebizwa nge-5-HT ne-Tianeptine kwi-vitro. I-synaptosomes yahlaziywa ngokufunyanwa nokukhutshwa kwe-5-HT nge-counter scintillation counter.
I-Raw Tianeptine i-sodium ityuwa ye-powder yi-antiypicalant inypical ngezenzo ezahlukeneyo, ngokugqithiseleyo kwi-glutamatergic system. Iyalumkisa ukukhululwa kwe-glutamate kwaye ihlengahlengisa umsebenzi we-AMPA receptor. I-tianeptine iphinda ibe njenge-agonist ye-μ-opioid receptor (EC50s = 194 kunye I-641 nM yamkeli yeziluntu kunye nemouse, ngokulandelanayo). Kusebenza ngendlela efana ne-fluoxetine ekulawuleni inkathazo yoxinzelelo emva kwesifo.
I-Tianeptine yetyuwa yesodium inamakhono angama-nootropic ngokubhekiselele kumntu onobuchule bakhe obunokuchaphazeleka kakubi ngenxa yokukhathazeka kwemizwelo kwaye unokukwazi ukuphucula ukugxilwa kunye nokugxininisa kubantu abangaboni kakuhle.
I-Tianeptine i-sodium ityuwa yomgubo (30123-17-2) Indlela yokuSebenza
Uphononongo olutshanje lubonisa ukuba i-tianeptine yenza njenge-agonist ngokupheleleyo kwi-mu-type receptor ye-opioid (MOR). I-Tianeptine inselele i-monoaminergic hypothesis yexinzelelo, kunye neendlela ezixhaswa ngokubanzi ezixhaswa yi-monoaminergic apho i-action ye-anti-depressants eyaziwayo ichazwe. Ngokukodwa, eli chiza kucatshangelwa ukuba liqhubeke liguqula i-glutamate receptor ukugqitywa kwe-hippocampal ye-hippocampal ye-CA3 ye-synapse enobudlelwane. Uphando lwangoku lubonisa ukuba i-tianeptine ivelisa iziphumo zayo ezixinzelelekayo ngokumodyuli ye-glutamate receptor (umzekelo, i-AMPA receptors kunye ne-NMDA receptors) kwaye inokuchaphazela ukukhululwa kwengqondo ye-neurotrophic (BDNF) eyenza ingqondo ye-brain. Uphando olutshanje luxhasa ngenkxaso ye-tianeptine kwindlela yokumodareyitha yomsebenzi we-glutaminergic kwi-amygdala, kwingingqi yomzwelo yengqondo ehambelana nezikhumbuzo.
I-Tianeptine inciphisa i-hypothalamic-pituitary-adrenal response kwi-stress, kwaye ngaloo ndlela ikhusela imiba yokuziphatha yokuxininisa. Ngeentonga, uxinzelelo lwe-stroke ekhulayo lwandisa amazinga angaphezulu kwe-glutamate kwi-amygdala ye-basolateral eyimpembelelo eyayivinjelwe yi-tianeptine. Ngokuthakazelisayo, i-SSRI fluoxetine yandisa amanqanaba e-glutamate e-extracellular kwi-amygdala ye-basolateral kungakhathaliseki ukuba imeko yokuxinwa. Ezi nkcukacha zibonisa ukuba indlela yokwenza i-tianeptine ihluke kwi-SSRIs kwaye ixhasa ingcamango yokuba indlela yokusebenza ye-tianeptine ihambelana nokuguqulwa komsebenzi we-glutaminergic kwi-amygdala kunye ne-hippocampus.
Ukongeza kwindlela ezi ngasentla, i-tianeptin yinto ekhethekileyo yokuxhatshazwayo kunye ne-anxiolytic imithi ekhuthaza ukufunyanwa kwe-serotonin (i-5-hydroxytryptamine; i-5-HT), kunye ne-5-hydroxyindoleacetic acid (i-5-HIAA) kwiisishu zobuchopho.
benefits of Tianeptine i-sodium ityuwa yomgubo (30123-17-2)
I-Tianeptine ityuwa yesodium inokuphatha ingxaki enkulu yokudandatheka.
I-Tianeptine ityuwa yeryudidi ine-anti-anxiety and anti-depressant kunye neempawu ze-nootropic.
I-Tianeptine ityuwa yesodium ikhuthaza isimo sengqondo kunye nokuphucula isimo sengqondo.
I-Tianeptine ityhudi yesodium inokubangela ukuhlaselwa kwesoyiko.
I-Tianeptine i-sodium ityuwa yiphatha intlungu enxulumene ne-fibromyalgia.
I-Tianeptine sodium ityuwa esetyenziswa kunyango lokudakumba kwamadoda anokungasebenzi kakuhle.
I-Tianeptine ityuwa yeryudidi ine-efficacy ecacileyo kwi-ADHD.
I-Tianeptine ityuwa yesodium inokukhuthaza i-neuroplasticity.
kucetyiswa I-Tianeptine i-sodium ityuwa yomgubo (30123-17-2) Isisombululo
I-Tianeptine Sodium ine-half-life life short about 2.5 iiyure14, kwaye idinga ukuphindwa kabini kwimihla. I-tianeptine ye-sodium dosage i-12.5 mg ithathwa kathathu ngosuku, i-37.5mg ngosuku.
Musa ukudlula i-50mg ye-Tianeptine Sodium ngosuku olunye. Ukwenza njalo kunokuvula umnyango wokusetyenziswa kakubi nokusetyenziswa komlutha.
Imiphumela I-Tianeptine i-sodium ityuwa yomgubo (30123-17-2)
I-Tianeptine i-sodium ityuwa ipowder idibanisa kunye neendawo ezininzi zengqondo ezibandakanya i-opiod receptors, ezinokudala umphumo wecala lovuyo. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo kunye nefrikansi ehlukeneyo ziquka ezi zilandelayo:
▲ Intloko (ukuya kwi-18%)
▲ Utywala (ukuya kwi-10%)
▲ Ukuphazamiseka / ukuphazamiseka ebusuku (ukuya ku-20%)
▲ Ukulala (ukuya ku-10%)
▲ Umlomo omile (ukuya kwi-20%)
Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zibandakanya izinto ezinjenge-constipation, i-nausea, ixhala okanye i-Inyety toxicity. Okuxhalabisayo ngakumbi kubandakanya ukuhoxiswa emva kokuxhatshazwa kunye noqikelelo lwe-0.1 - 0.3% yabasebenzisi baya kuba nale ngxaki. Njani na, njengoko ubonayo, iziphumo ezibi zeTyaneptine ityuwa yesodium iya kuxhomekeka kwi-biochemistry.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba:
Izigulane ezindala kufuneka zithathe umthamo omncinci weTyaneptine ityuwa yeryudi, njengokuba kufuneka izigulane zokungaphumeleli komntu. Isisombululo asidingeki ukuba iguqulwe kwizigulane ezinobunxila okanye ukuphazamiseka kwesifo, okanye izigulane kwi-dialysis .Nakuba i-Anti-depressants, njenge-tianeptine, yandise umngcipheko wesifo sobungozi besibindi.